हामी किन सपना देख्छौं, सपनामा जनावर देखेमा के हुन्छ ?
२५ असार २०७६, बुधबार १२:२२
रोहित शर्मा । हामी सबै सपना देख्छौं, कतिपय सपना सम्झन्छौ भने कतिपयलाई भुल्ने गर्छौं । सपना भनेको के हो ? कहिलेकाहीँ सपनामा जनावर देख्ने गर्छौ । यसले कस्तो संकेत दिन्छ ? भन्ने चासो सर्वत्र देखिन्छ । सपना मूलतः निदाएका बेला आउने कथा र छवि हुन् । यो विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । यसले हामीलाई खुसी, उदास साथसाथै त्रसितसमेत महसुस गराउँछ । कहिलेकाहीँ देखिएका सपना भ्रामक हुन सक्छन् भने कहिले यो पूर्णतया तार्किक पनि हुने गर्दछ ।
सपना निद्राको समयमा कुनै पनि बेला आउन सक्छ, तर धेरैजसो यो गहिरो निद्रामा आउने गर्दछ । जसलाई अंग्रेजीमा रेम भन्ने गरिन्छ । जसको पूर्ण रूप र्यापिड आई मुभमेन्ट भनिन्छ । रेम निद्राको बेला, हाम्रा आँखाहरू छिटोछिटो विभिन्न दिशामा चल्ने गर्छन् । सामान्यतः रेम निदाएको ९० मिनेटपछि हुने गर्छ । रेमको पहिलो अवधि सामान्यतः १० मिनेटसम्म रहन्छ । प्रत्येक रेम चरणहरू लामो हँुदै जान्छन् र अन्तिमको चरण भने एक घन्टासम्म लामो हुने गर्दछ । जसमा हाम्रो हृदयको र सास फेर्ने दर बढ्ने गर्दछ । यस अवस्थामा तीव्र सपना आउने गर्दछन् किनभने यसबेला मानिसको मस्तिष्क अधिक सक्रिय हुने गर्दछ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार हामी प्रति रात कम्तीमा चारदेखि ६ पटकसम्म सपना देख्छाैँ । सामान्यतः वयस्क र बच्चाहरूले प्रति रात दुई घन्टाको दरले सपना देख्ने गर्छन् । ती सपना ५ देखि २० मिनेटसम्म टिक्ने गर्छन् । एक साधारण जीवनकालमा मानिसले औसतमा ६ वर्ष सपना देख्ने गर्छन् ।
सपना आउने बारेमा कुनै ठोस निचोड भने छैन । यसमा वैज्ञानिकहरूको फरक फरक सिद्धान्त छन् । कसैले यसलाई केवल निद्रामा हुने मस्तिष्कको असमान गतिविधि भनेका छन् । सपनाले मानिसको वास्तविक जीवनमा कुनै अर्थ र औचित्य राख्दैन भन्ने उनीहरूको मत छ । अर्काथरी वैज्ञानिकहरू मानसिक, भावनात्मक र शारीरिक स्वास्थ्यका लागि सपना आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
कुन जनावर सपनामा देखिँदा कस्तो संकेत ?
कहिलेकाहीँ सपनामा जनावर देखिन्छ । यसले हाम्रो भावना र चेतनालाई समेत बुझ्न मद्दत गर्दछ । सपनामा जनावर देखिँदा यसले हाम्रो दयाशक्ति, हाम्रो सहनशीलता, आवश्यकता र चाहनालाई पनि संकेत गर्दछ । जनावरले हामीमा हुने सामान्य व्यवहार, कुनै चिजको प्रतिक्रिया र भावनालाई प्रतीकात्मक रूपमा व्यक्त गर्छ । सपनामा पशुहरू देखिँदा यसले हाम्रो अवचेतनमा लुकेका महत्वपूर्ण सन्देश दिने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ । यदि हामी सपनामा पशुसँग वार्तालाप गर्दैछौ भने त्यसले उच्च ज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास छ ।
गाई– गाईलाई सपनामा देख्नु राम्रो संकेत मानिन्छ । गाई देखिनु जीवनको महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको प्रतीक हो । गाईले निष्क्रिय व्यवहारको संकेत गर्दछ । यदि गाईको बथानलाई चरिरहेको देखिए यसले निकट भविष्यमा समृद्धि र आनन्दको भविष्यवाणी गर्दछ । गाईले प्रजनन, पोषण र मातृत्वको ईश्वरीय गुणहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
बिरालो – सपनामा बिरालोले एक स्वतन्त्र आत्मा, स्त्रीको यौनिकता, रचनात्मकता र शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ । सौथ, यसले दुर्भाग्यको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
कुकुर – सपनामा कुकुर देखिएमा बफादारी, उदारता, सुरक्षा र निष्ठाको संकेत मिल्छ । यस्तो सपनाले तपाईंको दृढता र असल मनसायले भविष्यमा अगाडि बढाउन र सफलता प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ भनिन्छ । यदि कुकुरले सपनामा खुट्टामा टोक्छ भने तपाईंले आफ्नो जीवनका पक्षहरूलाई सन्तुलन गर्ने क्षमता गुमाउनुभएको संकेत गर्दछ । यदि सपनामा कुकुरले खेदाइरहेको छ भने यसले आफूलाई दोषी भएको संकेत गराउँछ ।
चमेरा– चमेराको सपनाले अशुद्धता, फोहोर, राक्षसपना तथा प्रलोभन उद्धृत गर्दछ । चमेराले पुनरुत्थान र अवास्तविक क्षमता प्रतिनिधित्व गर्दछ । यस्तो सपना देख्दा मानिसले आफ्नो बानी सुधार्नुपर्ने हुन्छ । यसले केही अज्ञात परिस्थितिलाई पनि संकेत गराउँछ ।
सर्प– सपनामा सर्प देखिएमा डर र समस्याको चित्रण गर्दछ । सर्पले मानिसलाई सजग बनाउन मद्दत गर्दछ । यदि कसैले सपनामा सर्प देख्छ भने उसलाई उसको अतित वा वर्तमानले सताइरहेको र त्यसप्रति ऊ सजग नभएको वा त्यसलाई बेवास्ता गरेको बुझिन्छ ।
बाघ– सपनामा बाघ देखिनु राम्रो संकेत हो । लामो दूरीमा बाघ देखिएको सपनाले तपाईंको दैनिक जीवनमा पर्याप्त ऊर्जा दिने छ । यदि बाघलाई नजिकबाट देखेको सपना आयो भने यस्तो सपनाले राम्रो संकेत नगर्ने र सम्भवतः चाँडै आफ्नो जीवनमा केही नकारात्मकतालाई अंगाल्नुपर्ने संकेत गर्दछ । यो सपनालाई चेतावनीको रूपमा मान्न सकिन्छ ।